Casharki 5 aad siradi rasuulka scw | Saxil News Network
July 7, 2020 - Written by editor
ayuu ninkii martiqaad u sameeyey safarkii oo dhan. Waa ay la yaabeen waxayna yiraahdeen “weligayo waannu ku ag mari jirney martiqaadna nooma aadan samyn jirin ee maanta maxaa jira?”, wuxuu ku yiri waa sax laakiin marti baad tihiine imaada. Markii ay u yimaadeen wuxuu yiri “Ma cid baad ka soo tagteen?”, waxay ku jawaabeen yar ayaannu rarkii uga soo tagnay. Baxiira ujeeddadiisu waxay ay ahayd wiilka yar markaasu ku yiri “u yeera gabanka”.
Markii la qadeeyey ayuu Baxiira su’aal weyddiiyey Abii-dhaalib oo uu ku yiri “wiilkan mxaad u tahay”? wuxuuna ugu jawaabey “Aabbe ayaan u ahay”. Baxiira waxa uu yiri “suurogal maaha in wiilkan aabbihiis nool yahay ee maxaad u tahay?”. Abii-dhaalib waxaa uu yiri “Adeer baan u ahay”, intaa ka dib Baxiira wiilkii ayuu gees ula baxay wuxuuna weyddiiyey su’aalo, ugu dambeyntiina wuxuu ka arkay khaatumkii nebinimda oo nabiga scw garbihiisa dhexdooda ku yaalley.
Baxiira wuxuu ku yiri Abii-dhaalib “wiilkani arrin weyn ayuu yeelan doonaa, waxa aan anigu ka fahmeyna haddey nimanka yahuudda ihi ka fahmaan waa ay dilayaan ee ku celi magaaladiisii kana ilaali yahuudda”, Abii-dhaalib markii uu alaabtiisii soo gateyba si degdeg ah ayuu ugu soo rogmaday Makka. Markaas ka dib waxaa uu Rasuulku SCW Makka ka baxay hal mar oo kale illaa hijrada laga gaarey. Rasuulka SCW markuu soo barbaaray waxa uu bilaabey inuu buuraha Makka ariga ku ilaaliyo.